कल्पनाले तिर्खा मेटिँदैन – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: आइतवार, जेष्ठ ४, २०७७
यहाँ चर्चा गरिन लागेको कुरा एकदमै फरक छ । कसैले कुनै कुराको चर्चा गर्छ, कसैले कुनै । कसैले इतिहासको कुरा गर्छ, कसैले त्यो जमानामा यस्तो–यस्तो भएको थियो भनेर कुरा गर्छ । कसैले यति पछिको कुरा गर्दछ । जुनबेला तपाईँ यस संसारबाट जानुहुनेछ, त्यतिबेला तपाईंको साथमा के हुनेछ ! भनिन्छ नि– ‘ तपार्ईंले यस्तो गर्नुभयो भने यस्तो हुनेछ, तपाईंले यस्तो कर्म गर्नुभयो भने स्वर्ग जानुहुनेछ ।’ तपाईंले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन— यी विभिन्न कुराहरू गरिन्छ । वर्षौं अगाडि, सय वर्ष या हजार वर्ष पहिला के भयो— यस्ता कुराको चर्चा गर्नेहरू पनि धेरै छन् । मानिसहरूले यस्तो कुराको पनि चर्चा गर्दछन्— ‘यस्ता–यस्ता महापुरुष आउनुभयो । उहाँहरूले यस्तो–यस्तो गर्नुभएको थियो ।’ अनि मानिसहरूले उहाँहरूको कुरा सुनेर कति राम्रो कुरा भनेर पनि भन्नुभयो । तर, अहिलेको समयका बारेमा कुरा गर्ने एकदमै कम छन् । म कुरा गर्छु— ‘अहिलेको’ । तपाईं र हाम्रो जीवनमा यो जुन अहिलेको समय छ— यो इतिहासको कुरा होइन, ‘अब’ को कुरा हो !
यदि कोही भोको छ र उसले तपाईंकहाँ आएर ‘मलाई खानेकुरा दिनुहोस्, म भोको छु’ भन्यो अनि तपाईंचाहिँ उसलाई सम्झाउन थाल्नुहोस्— ‘फलानो–फलानो ठाउँमा दुई हजार साल पहिले एकदमै मीठा–मीठा परिकार बनाउने गर्दथे । यदि तपाईँ त्यो समयमा जीवित नै हुनुभएको भए, ती मिष्टान्न खाँदा तपाईँलाई निकै आनन्द आउने थियो ।’ अथवा, उसलाई कसैले सम्झाउन थालोस्— ‘ तपाईंको यहाँ बस्ने समय पू्रा भएपछि, यदि तपाईंले जीवनमा सबथोक राम्रो गर्नुभएको छ र तपाईं स्वर्गमा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईंले खानका लागि लड्डु पाउनुहुनेछ, पुरी पाउनुहुनेछ— धेरै थरिका पकवानहरू पाउनुहुनेछ ।’ तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ त्यो मानिसले के गर्नेछ । त्यो मानिसले तपाईंलाई छोडेर अर्को मानिससँग सहायता माग्नेछ र भन्नेछ— ‘मलाई भोक लाग्यो । के तपाईंसँग खानेकुरा छ ?’ यदि फेरि त्यो अर्को मानिसले पनि त्यसै गरी भाषण सुनायो भने ऊ तेस्रो व्यक्तिकहाँ जानेछ । ऊ कहिलेसम्म गइरहनेछ ? जहिलेसम्म उसको भोक मेटिँदैन ।
भोकको निवारण गर्नु, भोक मेटाउनु भनेको भाषाको विषय होइन । किनभने उसलाई सम्झाउनेहरू त यस्ता पनि होलान्, जसले भन्नेछन्- ‘वास्तवमा भन्ने हो भने त तपार्ईंलाई भोक नै लागेको छैन । तपाईं किन आफूलाई भोको ठान्नुहुन्छ ? यो त तपाईंको कर्मको फल हो । तपाईँले पूर्वजन्ममा कुनै न कुनै गलत काम गर्नुभएको थियो होला । त्यसैकारणले अहिले तपार्ईं यस्तो दुःख भोगिरहनुभएको छ । तपाईंले खाना त पाउनुभएको छैन । यो तपाईंको कर्मको फल हो ।’ उसलाई जतिसुकै भाषण सुनाऊँ, उसलाई जतिसुकै सम्झाऊँ तर उसको भोकलाई मेटाउनु भनेको खानेकुरा कै विषय हो । जब त्यो मानिसले खानेकुरा पाउँछ र उसले खानेछ— खाना पाउने मात्रै कुरा होइन, खानैपर्ने कुरा पनि हो । खाने कुरालाई अगाडि राख्दैमा मात्र ऊ सन्तुष्ट हुन सक्दैन । जब खानेकुरा पाउनेछ, अनि त्यसलाई खानेछ तब मात्र उसको भोक मेटिनेछ । उसको भोक मेटिएपछि मात्र उसले समस्याबाट छुटकारा पाउनेछ । अनि ऊ सन्तुष्ट हुन सक्छ ।
हामीभित्र पनि एउटा भोक छ । हामी के ठान्दछौँ भने त्यो विभिन्न कुराहरूको भोक होला । कोही ठान्दछ छोराको भोक हो । कोही ठान्दछ धनको भोक हो । भनिन्छ- अपबल, तपबल र बाहुबल अनि चौंथो बल हो दामको । यसको अर्थ के हो ? यस संसारमा केही मानिसहरूले के ठान्दछन् भने ‘अपबल’ ठूलो कुरा हो । मानिसले यस कुरामाथि गर्व गर्छ । मैले त यस्तो यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ । म त्यहाँ गएँ । म त त्यहाँ पनि पुगेर आएको छु- यो हो ‘अपबल’ । ‘तपबल’— मैले त यो गरिदिएँ । मैले त त्यो गरिदिएँ, मैले दान गरेको छु । अनि बाहुबल, यो पनि त बल हो । मानिसहरू ठान्दछन् म त हट्टाकट्टा छु । चौथो बल हो दाम अर्थात् रूपैयाँ । मानिसहरूलाई यसमा पनि घमण्ड छ ।
यो दुनियाँको सङ्घर्षमा हामी झगडा गरिरहेका छौँ । यो युद्धमा पहिला हामी सोच्दछौँ— यदि मसँग ‘अपबल’ भयो भने मैले जित्नेछु । ‘तपबल’ भयो भने मैले जित्नेछु । ‘बाहुबल’ भयो भने मैले जित्नेछु । जब सबै कोसिस गरेर मानिस हार्दछ । जब पैसाले पनि काम गर्दैन । आफ्नो बलले पनि काम गर्दैन । तपस्याको, परिश्रमको बलले पनि काम गर्दैन । पाखुरीको बलले पनि काम गर्दैन । जब हार्दछ अनि हृदयमा शान्तिको तिर्खा लाग्छ ।
यो तिर्खा सबै मानिसको हृदयमा लाग्दछ । पहिला तिर्खा दिमागमा लाग्छ अनि मानिस यताउता जान्छ । भौँतारिन्छ र भन्दछ— ‘म त किताब पढ्नेछु ।’ उसले किताब पढ्छ र किताब पढेपछि के पाउँछ ? जुन कुरालाई हामीले विचारले, सोचाइले बुझ्न सक्दैनौँ, यदि हामीले त्यसलाई कल्पना गरेर प्राप्त गर्ने कोसिस ग¥यौँ भने पनि हामीले जे प्राप्त गर्छाैँ ती सबै निरर्थक हुनेछन् किनकि त्यो चीज कल्पनाभन्दा बाहिरको हो ।
हामीमा सोच्ने, विचार गर्ने जुन शक्ति छ त्यो सानोतिनो होइन— एकदमै ठूलो छ । कसरी ? यदि मैले नेपालबाट अमेरिका जाने कोसिस गरेँ भने हवाइजहाजमा एक–दुई दिन लाग्न सक्छ । तर, म कल्पना गरेर नेपाल फर्किन चाहेँ भने कतिबेर लाग्छ र ? मैले त यहाँबाट हल्लिनु पनि पर्दैन । केवल कल्पना ग¥यो, कल्पनाद्वारा, विचारद्वारा म तुरुन्तै नेपालमा आइपुग्छु ।
त्यसकारण सोच्ने कुरा छ । शरीरद्वारा होइन । कल्पनाद्वारा मानिस कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्छ । यो कल्पना शक्ति हो । खानेकुराका बारेमा, पकवानका बारेमा वर्णन गरेर पुग्दैन । धेरै पटक के भएको छ भने— म वर्णन गर्न थाल्छु, अनि मानिसहरूको मुखमा पानी आउन थाल्दछ । अर्थात् कल्पनामा नै यति शक्ति भयो कि हाम्रो मुखमा पानी पनि आउन थाल्यो । त्यसकारण विचारले, शब्दहरूले हामी चीजहरूको व्याख्या गर्न सक्छौँ । शब्दद्वारा हामी, एक अर्कोलाई थुप्रै कुराहरू भन्न सक्छौँ ।
यहीँनेर मानिसहरूको कमजोरी हुन्छ । वर्णनमा नै उनीहरूलाई यति आनन्द आउन थाल्दछ कि उनीहरू वर्णनमै अड्किन्छन् । त्योभन्दा बाहिर निस्किँदै निस्किँदैनन् । कतिपय मानिसहरू त यस्ता पनि छन्– पुस्तक पढ्न थाले भने पुस्तक नै पढिरहन्छन् । पढिरहन्छन् । एउटा होइन । त्यसपछि दोस्रो पनि पढ्छन् । त्यसपछि तेस्रो पनि पढ्छन् । यदि उनीहरूसँग त्यसमा लेखिएको कुरा पाउनुभयो भनेर सोध्नुभयो भने भन्दछन्, ‘अहँ पाएनौँ हजुर पाएनौँ । तर, त्यसको वर्णनलाई पढ्दा रमाइलो लाग्यो ।’ जुन कुराको खोजी छ यदि त्यो पाउनु भएन भने त्यसलाई पढ्नु, उच्चारण गर्नु, त्यसको वर्णन गर्नुको अर्थ के भयो र ? त्यसको के फाइदा भयो र ?
मानिसलाई प्रत्यक्षीकरणको आवश्यकता छ । प्रत्यक्ष ! जसलाई उसले अनुभव गर्न सकोस् । महसुस गर्न सकोस् । सिद्धान्तका कुरा होइन । भोकोलाई सिद्धान्तको आवश्यकता पर्दैन । तिर्खालुलाई सिद्धान्तको आवश्यकता पर्दैन । प्यासीलाई चाहिन्छ- पानी । भोकोलाई चाहिन्छ- भोजन । त्यस्तै गरेर हृदयको तिर्खा तब मेटिनेछ, हृदयको तिर्खा तब तृप्त हुन्छ जब उसले त्यो वास्तविक चीजलाई पाउँदछ । त्योभन्दा पहिला होइन । यो कुराको अनुभव मानिस स्वयम्ले गर्नुपर्छ । ठिक छ, अब मलाई शान्ति भयो भनेर मनले मानेर हुँदैन ।
पहिले शान्तिको अनुभूति हुनुपर्दछ । जुन शान्तिको खोजी मानिसलाई छ, त्यो ऊभित्रै छ ।
(यो लेख प्रेम रावतको सम्बोधनलाई सम्पादन गरी साभार गरिएको हो । उहाँ मानवता र शान्तिको विषयमा चर्चा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ । उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारीका लागि www.premrawat.com र प्रतिक्रियाका लागि [email protected] प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)
कोरोना नियन्त्रणको योजना खोई ?
अब त आत्मनिर्भरताको पाठलाई पनि पढौँ न !